In Qaranka la caayaa waa qaran dumis nimo.
Home QORMOOYIN In Qaranka la caayaa waa qaran dumis nimo.
Doorashadii inoo qabsoontay 31 kii May 2021 waxay koobsatay muuqaallo badan oo aan caadi ahayn.
Waxa ka mid ahaa aragtiyahaa in shacabka loo abaabulay si qabiilaysan taasina ay keentay in qabaailku markay ku heshiin waayeen magacaabista murashaxiinta iyo tilmaamaha ama tayada lagu soo xulayo ay xukuumaddu soo kala dhoweysatay kadibna qabaaikii sii kala jajabeen.
Taasina waxay keentay in xisbiyada loo kala hormo iyadoo la raadinayo uun madal la iska sharraxo oon la aaminsanayn xisbiga himilooyinkiisa ama mabaad’idiisa.
Waxa dhacday in ay xisbiyada mucaaridka ka soo baxeen xubno aan marka hore ka tirsanayn oo taageerayaashoodii ay ka codeeyeen axsaabta mucaaridka ah.
Sida qaabka xun ee ay wax u dhaceen waxa masuul ka ahayd xukuumadda iyo xisbiga muxaafidka ah.
Sidaa marka xaal yahay waxa loo baahnaa in xisbiyada mucaaridku ka faaiidaystaan ilduufkaa siyaasadeed ee xukuumadda ka dhacay oo ay sameeyaan siyaasad ka bedelan tii marka hore lagu nacay.
Ucid isaga guddoomiyehiisu sedex jeer ayuu tartamay sedexdiibana wuu ku hadhay.
Wadanina mar buu tartamay uu dhacay laba jeerna Ucid buu ka mid ahaa uu Faisal khasaarihiisa qayb ka ahaa.Wadani wuxuu leeyahay Guddoomiye iyo Guddoomiye ku xigeen, Guddomiye ku meel gaadh ah oo magacaa sita isagoo Guddoomiyihi joogo, iyo Hogaamiye.
Magacyadaa sida dhaameelka la lulayo anigu ma garan cidda loo lulayo.
Haddii labadaa xisbi ee mucaaradku ay doonayaan in xubnaha doorashadii ka soo baxay ay noqdaan xisbiyahanno rasmi ah waa in isbeddel la sameeyaa oo uu noqdaa isbeddel u cuntama shacabka aqlabiyadda Golaha Sharcidejinta siiyay.
Waxan maqlayay oo maalmahan baraha bulshada la wadhfinayay in xildhibaannadii la iibsanayo anigu ma sheegi karo mana caddayn karo arrinkaa sida wax uga jiraan laakiin waxan ogahay in arrinkaasu saamayn raagta ku yeelanayo sumcadda dalka iyo ta xildhibaannada.
Haddii goleheenni sharci dejintu magan u noqdo shilin macnaheedu waxa weeye dal jira ma ihin.Hadalkuna waxa la yidhaa intuu afkaaga ku jiro ayuu ammaandaa yahay.
Haddii xildhibaannadu dhaqan noocaas ah yeeshaan waddaniydii Meesha way ka baxday oo berritona Farmaajo oo lacago shisheeye ku socdaan ayaa iibsan doona.
Marka kuwii aynu soo xulnay sidaa yihiin ma garan Meesha inoo fayow.
Waxay ila tahay in waxii aan la caddayn karin laga waantoobo wadwadkeeda waayo ceeb raad xun bay ku yeelanaysa dalka jiritaankiisa.
Inta Somaliland necebina way la socota gacanta ku xanuunaysa iyadaanay ku maroojinayaan.
Xildhibaannadii ay shacabku soo xusheen ayaa laaluush lagu iibsanyaa waa cay qarandumis ah ee ha laga waantoobo.
Previous articleXukuumadda Somaliland oo mustaafurisay Shaqaale ka tirsan hay’adda EUCAP iyo Sababta
Next articleMadaxweyne Biixi oo qaabiley Xildhibaankii u horeeyey ee Madaw oo ku soo baxay Golaha Dalka Finland